Aingam-panahy avy amin'ny Lowercase King — Trip LEE - OFISIALY SITE
Amin'izao fotoana izao dia mankalaza ny lova ny lehibe indrindra mpitarika ny Civil Rights hetsika, Dr. Martin Luther King Jr. Nampiasa ny Tompo io lehilahy io mba aingam-panahy ny firenena, ary mifindra ny olona mankany amin'ny fitoviana. Mbola asa tokony hatao, fa ny fanomezana dia sarobidy. Tsy misy mahery fo tanteraka, ary Dr. Mpanjaka tsy nisy afa-tsy, fa mahafinaritra azy amin'ny fomba maro sy aingam-panahy aho ny lova navelany. Ireto misy zavatra telo momba ny fiainany izay aingam-panahy ahy.
Dr. Mpanjaka i Naharikoriko noho ny tsy rariny izay manjaka eo amin'ny tontolo misy antsika, ary nanolo-tena ny ady hamelezana azy. Ao amin'ny Baiboly, dia nahita ny fahitana noho ny an'izao tontolo izao, Hitany ny mpaminany miantso ho amin'ny faran'ny fampahoriana, ary Izy dia liana ny hahita fa ny rariny tonga. I mankafy izany fitiavany ny rariny, ka mangataha amin'ny Tompo dia manohy ny asany izany amin'ny fony. Te-hiady ho an'ny ampahoriana, ary hitory teny soa mahafaly amin'ny fanantenana.
Na dia teo aza ny youthfulness, Dr. Mpanjaka-paminaniana mazava tsara kabary sy ny vato krystaly fahitana niseho nitondra azy toy ny mpitarika ny hetsika. Tsy mipetraka ary mitaraina, dia vao mainka izy ka nitondra. Izy dia mazava ny zavatra noheveriny fa hanampy mainty hoditra mandroso, dia nitondra ny hafa amin'izany lalana. Izany niafara tamin'ny tsy misy herisetra fanoherana izay nanampy hanova ny United States mandrakizay. Afaka mianatra avy amin'izany rehetra karazana mpitarika. Vision ihany no sarobidy rehefa manambady ny mpitondra. Ny mpitarika nanampy ny fahitana tonga.
Mazava ho azy, ny ady dia tsy nihaona tamin'ny tsikitsiky sy mamihina. Dia nanao vivery ny ainy izy isaky ny nandeha, niteny, na ny hetsi-panoherana. Fantany ny zavatra nataony dia mampidi-doza, nefa nanana ny herim-po hametraka ny ainy eo amin'ny tsipika ny vahoakany. Ny mpanohitra tsy izy no tokony hitodika tsirambina ny fahitany, na nampihena ny mpitarika. Izany ihany no nampahatsiahy azy ny antony izy niady. Mivavaka aho mba ny Tompo dia hiasa ao amiko iray izay mijoro tsy voahozongozona herim-po noho ny fanjakany sy miady ho voninahiny.
Manantena aho fa ianao aingam-panahy ny ohatra nomeny ihany koa, ary manantena aho hiaraka amiko ianao amin'ny fiderana an'Andriamanitra noho ny zavatra tanteraka amin'ny alalan'ny Dr. Malagasy.
Pstan26 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:28 aho • navalin'i
for the love of Nigeria • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:29 aho • navalin'i
Tamiehicks • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:30 aho • navalin'i
Dan Smith • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:30 aho • navalin'i